प्रचण्ड र माधव नेपाल अस्थीरताका सम्वाहक- अध्यक्ष ओली - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
बुधबार, मंसिर २९, २०७८ (December 15, 2021, 1:31 pm) मा प्रकाशित
‘प्रचण्ड मामुली कर्मचारी’
बुधबार, मंसिर २९, २०७८, काठमाण्डौ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताका सम्वाहकको संज्ञा दिएका छन् ।
नेपालमा अस्थीरता मच्चाउन खोज्ने नियत्रित शक्तिहरु सक्रिय रहेको र त्यसका सम्वाहक प्रचण्ड र नेपाल रहेको आरोप ओलीले लगाए ।
कतिपयले अझै पनि कम्युनिष्ट एकताको कुरा गरिरहेको भन्दै ओलीले भने, ‘त्यस्ताहरुसँग एकता ? अस्थीरताका शक्तिहरुसँग एकता गरेर कहिँ पुगिन्छ ? त्यो एकीकरण सम्भव नै छैन ।’
उनीहरुको सम्बन्ध कहाँ छ भन्ने कुरा आफूले राम्ररी चिनिसकेको ओलीले बताए । ‘हामीले राम्ररी चिनिसकेका छौं यिनीहरुको कनेक्सन कहाँ छ, तार कहाँ जोडिएको छ, कहाँबाट स्वीच अन अफ हुन्छ, त्यो हामीले देख्या छौं । छर्लङ्ग देख्या छौं ।’
ओलीले बार्गेनिङका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गरेको दाबीसमेत गरे । प्रचण्ड एक ‘मामुली कर्मचारी’ भएको भन्दै ओलीले धोकापूर्ण ढंगले उनी महान नेताको रुपमा प्रस्तुत भएको समेत बताए ।
‘नेपालमा जनयुद्ध नामको गतिविधि सफल हुँदैनथ्यो किनभने त्यो सफल गर्न सुरु गरेकै होइन,’ ओलीले भने, ‘त्यो त बार्गेनिङको लागि लगाम आफ्नो हातमा राख्ने विधि हो ।’
त्रसित, अशान्त, अस्तव्यस्त बनाइदिने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने नीति अन्तर्गत जनयुद्ध सुरु गरेको र प्रचण्ड धोकापूर्ण ढंगले महान नेताको रुपमा प्रस्तुत भएको ओलीको आरोप छ ।
उनले भने, ‘महान क्रान्तिको सेन्टिमेन्ट त्यतातिर लगियो, बुझ्न उनीहरुले सकेनन्, के गर्न खोजिदै छ र मामुली कर्मचारीहरु, मामुली पेड मान्छेहरु महान नेताको रुपमा प्रस्तुत भए ।’